ဘလော့အတွက် နောက်ခံ ကာလာ/ ပုံ တွေထည့်နည်း ~ ITmanHOME
10:24 blog3comments
ကဲဗျာ သည်တစ်ခါတော့ မိမိတို့ဘလော့ကို လှလှလေးဖန်တီးခင်ြသူများအတွက်ပေါ့..
နောက်ခံတွေ လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲ နိုင်တဲ့ ကုဒ်လေးတွေကိုလမ်းပြပေးလိုက်ပါတယ်..
►3- LAYOUT ကိုကလစ်ပါ..။
►4- EDIT HTML ကိုဝင်ပါ.. Process ကိုကလစ်ပြီးဆက်ဝင်လိုက်ပါ။
►5- EXPAND WIDGET TEMPLATES ကိုအမှန်ခြစ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်...။
►6- အထဲမှာ အောက်က သက်ဆိုင်ရာ ကုဒ်တွေအလိုက်ှရာပြီး ပြင်နိုင်ပါတယ်...
ဒါက background color ချိန်းဖို့ပါ
အောက်ကပုံလေးတိုင်း လိုအပ်တဲ့ကာလာကို ပြောင်းလဲ ပေးလိုက်ပါ။
ဒါကတော့ဘေးက ဆိုဒ်ဘား နောက်ခံကာလာအတွက်ပါ။
ဒါကတော့ ပို့စ်တင်တဲ့ အဓိကနေရာပင်မကြီးးရဲ့ နောက်ခံကာလာတွေအတွက်ပါ။
အဆင်ပြေသလို လှုပ်ရှားလိုက်ပါနော်... အောင်ကတော့ ထပ်ဆင့်ပြီး
မျှဝေလိုကတာပါ..နောက်ခံ ပုံလေးတွေ ထည့်နည်းပါဗျာ....... ပြည့်စုံအောင်ပေါ့...ထည့်ပေးလိုကတယ်..
ဒါကတော့ ဘော်ဒီ နောက်ခံ ပုံအတွက်ပါ။
ဒါကတော့ main နေရာအတွက်ပါ။
မှတ်ချက်. ။ ။ မိမိတို့ လိုခြင်တဲ့ ကာလာ ဖြစ်စေ....ပုံဖြစ်စေ... လင့်များကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. အဲလင့်တွေကို သူ့နေရာ မှာ အနီရောင်နေရာပေါ့ ထည့်ပေးရပါမယ်....
11 June 2014 at 18:06 Reply
my web blog - goji actives (http://veraicon.co.kr/)
15 July 2014 at 23:24 Reply
J Ryan signed with the division rival Toronto Blue Jays, Baltimore quickly
traded Steve Kline to Giants for RHP La - Troy Hawkins (2-8 3.
Cinema, theater and films are the cultural centers of Los Angeles.
The only reason (if you can call it that) they put him on that site
is simply because of the kind of phenomena he was involved with, no other reason.
Here is my web page; League Of Angels Hack For IOS
26 August 2014 at 13:47 Reply
Visit my blog: Zamurai PBN Blueprint pdf